Diaayaradihii duqeeyay Gobolka Bari oo la sheegay in ay laayeen Xoolo badan
BARMUUDO.COM:- waxa maalmo ka hor degmada Caluula ee gobolka Bari diyaarado aan la ogeyn halka laga leeyahay duqeymo ka xoolo badan lagu laayay ka fuliyay halkaasi. Qof kamid ah dadka deegaanka ayaa BARMUUDO.COM u xaqiijiyay in duqeynta loo geystay xoolo fara badan oo isugu jira Geelal, Lo’ iyo Ari. Si joogta ah waxa diyaaradaha […]
DEG-DEG:- Amisom oo qof shacab ah ku dishay Degmada Afgooye
BARMUUDO.COM:- Wararka anu ka heleyno Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose,ayaa waxa ay ku soo waramayaan in Goordhaw Halkaas lagu dilay Nin la sheegay in uu aha qof shacab ah sida ay inoo shegeen Dadka Degaanka. Raga dilka geystay ayaa lagu sheegay in ay ahayeen Ciidamada Amisom, islamarkaana Ruuxa la dilay uu dhagax uu ku […]
Shil dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay gobolka Waqooyi Bari
BARMUUDO.COM:- Wararka naga soo gaaraya Dalka Kenya gaar ahaan Gobolka Waqooyi Bari ayaa waxa at ku soo waramayaan inShil Gaari oo Khasaare badan geystay ka dhacay duleedka Magaalada Gaarisa ee Gobolka Waqooyi Bari ee Dalka Kenya. Gaari Bas ah ayaa ka yimid magaalada Wajeer halka midka xamuulka uu ka soo baxay Magaalada Nairobi waxa la […]
Kuuriyada waqooyi oo gantaal muran dhaliyay tijaabisay
BARMUUDO.COM:- Kuuriyada Woqooyi ayaa gantaal ay ridday dul marisay woqooyiga Japan oo wuxu ku dhacay badda. Ciidamada Japan iskuma ay dayin in ay soo ridaan ama dhexda ku qabtaan gantaalkaa in kasta oo raadaalladu markiiba digniin bixiyeen, waxaana gantaalkaa la riday aroornimadii hore ee saaka. R/Wasaaraha Japan, Shinzo Abe, ayaa ku tilmaamay gantaalkaa la dul […]
Cosoble oo goor dhow gaaray magaalada Baladweyne
BARMUUDO.COM:- Wararka naga soo gaaraya Magaalada Balad Weyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan,ayaa waxa ay ku soo waramayaan in Goordhaw oo Maanta ah uu halkaas gaaray Wafdi uu Hogaaminayo Hogaamiyihii hore ee Maamulka Hir-shebaale,Cali C/Laahi Cosoble, oo ay Codka kalsoonida dhawaan ay kala noqdeen Xildhibaanada Maamulkaas. Marka uu ka soo dagay Garoonka Diyaaradaha Magaalada Balad weyne […]
DEG-DEG:- Qarax xoogan oo hadda ka dhacay Muqdisho
BARMUUDO.COM:- Qarax loo adeegsaday Gaari ayaa Gorordhaw ka dhacay Wadada Maka-almukarama ee Magaalada Muqdisho gaar ahaan meel u dhow hotel Mubarak. Warar hada na soo gaaraya ayaa waxa ay ku soo waramayaan in qaraxa uu ka dhacay Jak-boonti Ciidamada Dowlada ay ku lahayeen meel u dhaw Hotelka Mubaarak ee Wadada Makka-almukarrama ku yaala waxaana weli cadeyn in uu […]
August 27th, 2017 | Posted in Wararka | Read More »
Alshabaab oo sheegatay in ay la wareegtay Deegaanka Golweyn.
BARMUUDO:- Al-Shabaab ayaa markale saakay weerar ku qaaday deegaanka Golweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose,halkaas oo ay fariisin ku leeyihiin Ciidamo ka tirsan kuwa Midowga Afrika Amisom iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Dagaal culus oo mudo socday ayaa halkasi ku dhexmaray,kaas oo hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeeg sanayay sida ay BARMUUDO.COM u sheegeen dad deegaanka qaarkood […]
Xog:- Muxuu ahaa ninkii fuliyay weerarkii Brussels?
BARMUUDO.COM:- Wasiirka Socdaalka ee dalkaasi, Theo Francken ayaa sheegay in Ninkii ay ciiddanka Jimcihii ku dileen magaalladda Brussels uu ahaa Muwaadin Somali haystay dhalashadda Belgium. Waxa uu tilmaamay in Ninkaasi magangelyo Qaxootinimo la siiyey sannadkii 2009-kii, isla markaana Dhalashadda dalkaasi la siiyey sannadkii 2015-kii. Dacwad-oogayaasha dalkaasi ayaa iyagana sheegay inaysan ogeyn inuu Ninkaasi xiriir la […]
Faafaahino laga helayo dhacdo ka dhacday Gobolka Gedo
BARMUUDO.COM:- Wararka anu ka heleyno Degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo, ayaa waxa ay ku soo waramayaan in Dad Xoolaha dhaqato ah ay isku laa”yeen Degmadas,sida ay inoo shegen Dadka Degaanka. Dagaalka ayaa waxa uu dhexmaray labo Nin oo Xoolaha dhaqato ah kuwaas oo isku dhuftay Toorey,islamarkaana mid ka mid ah Ragaas uu dhawacmay halka midka […]
Venezuela oo shacabkeeda tababar u furaysa
BARMUUDO.COM:- Dowlada dalka Venezuel ayaa isku dubariday dhoolatus militari guud ahaan dalkaasi ,iyada oo kumanaan qof oo rayid ah la barayo sida loo isticmaalo qoryaha iyo qaabka gacanta loogu dagalamo. Dowlada Venezuelan ayaa sheegtay in maalinkii kobaad ee dhoolatuskan ay ka qayb qaateen 200,000 oo ciidamada dalkaasi ah iyo 700,000 oo isugu jira rayid iyo […]